Burma Strange News (Burmese Version): February 2011
ပူပြင်း ခြောက်သွေ့သည့် ၂၀၁၁ ခုနှစ်နွေရာသီသည် မတ်လဆန်းတွင် စတင်လိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း၊ နွေရာသီတွင် ပူအိုက်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထူးခြား ဖြစ်စဉ် သတင်းတပုဒ် အဖြစ် မီဒီယာတခုက ရေးသားလိုက်သည်။
နွေရာသီ စတင်ချိန်တွင် နှာခေါင်းနှစ်ပေါက်ပါသော လူသားများ နှာခေါင်းနှစ်ပေါက်ဖြင့် အသက်ရှုလျက် တွေ့ရကြောင်း၊ အလွန် ထူးဆန်းကြောင်း BSN သတင်းထောက် တဦးက ပြောသည်။
ထိုနည်းတူ မိုးရာသီ စတင်တော့မည့် အချိန်တွင်လည်း မိုးရာသီ ရောက်တော့မည် ဖြစ်သဖြင့် မိုးရွာသွန်းမှုများ ဖြစ်ပေါ်မည်ဟူသော သတင်းဆောင်းပါးများ ဆက်လက် ပေါ်ထွက်ဖွယ် ရှိနေသည်။
Posted by BS News at 5:03 AM0comments
အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် အာဇာနည်ကြီးများ လုပ်ကြံမခံရမီ အချိန်ကာလတခု ကပင် ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်ကို "အာဇာနည်နေ့" အဖြစ် သတ်မှတ် တည်ရှိခဲ့ပြီး ဖြစ်ကြောင်း ပြည်တွင်းထုတ် ဂျာနယ် တစောင်က ရေးသားဖော်ပြသည်။
(From: Snap Shot)
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၊ သခင်မြ၊ ဒီးဒုတ်ဦးဘချို၊ ဦးရာဇတ်၊ မန်းဘခိုင်၊ ဦးဘ၀င်း၊ မိုင်းပွန်စော်ဘွားကြီး စ၀်စံထွန်း၊ အတွင်းဝန် ဦးအုန်းမောင်နှင့် ရဲဘော်ကိုထွေး တို့သည် ယခင်ကတည်းက ရှိနှင့်ပြီးဖြစ်သော အဆိုပါ အာဇာနည်နေ့ နှစ်ပတ်လည် နေ့ရက်တွင် တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် လုပ်ကြံခံခဲ့ကြရသည်ဟု အထက်ပါ ရေးသားချက် အရ သိရသည်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့ လုပ်ကြံခံရသောနေ့နှင့် ကံအားလျော်စွာ တိုက်ဆိုင်သွားသော အဆိုပါ ရှိနှင့်ပြီး အာဇာနည်နေ့သည် မည်သည့်အတွက်ကြောင့် ဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါက် လာရကြောင်းကိုမူ ဖော်ပြပါ ဂျာနယ်က ရှင်းလင်းမှု မပြုပေ။
အာဇာနည်နေ့သည် အာဇာနည်ဆိုသူ၏ မွေးနေ့ဖြစ်ပြီး၊ ထိုနေ့တွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် လုပ်ကြံခံခဲ့ရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း မူလတန်း ကျောင်းသားတဦးက ရေခဲမုန့်စားရင်း ရှင်းပြသွားသည်။
Posted by BS News at 1:50 AM7comments
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် Facebook သုံးမည်ပြောသဖြင့် မဇကာပေါက် အလွန်ပျော်ရွှင်
မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က Facebook သုံးတော့မည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားလိုက်သည်။
သို့သော် ကိုနတ်ရှင် နှေးသဖြင့် စိတ်ညစ်ရသည်ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အမည်ဖြင့် တင်ထားသည့် Facebook စာမျက်နှာတခု
အိုင်တီ လောကတွင် မြန်မာလူမျိုးများ၏ အောင်မြင်မှုကို အသိအမှတ်ပြုရန်နှင့် မြန်မာစကား ကမ္ဘာသို့ ထိုးဖောက်ခြင်းကို အသိအမှတ်ပြုရန် Twitter ကို အသုံးပြုလိုကြောင်း မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မကြာသေးမီက ထုတ်ဖော် ပြောကြားခဲ့သည်။ Twitter သည် တွတ်တီးတွတ်တာမှ ဆင်းသက်သော မြန်မာစကားဖြစ်ပြီး တည်ထောင်သူမှာ
မြန်မာ အမျိုးသမီးကြီး ဒေါ်စီ (Jack Dorsey) ဖြစ်သည် (ပြန်ဖတ်ရန်)။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သူမ၏ Facebook ကို စိတ်ဝင်စားမှု မပြသခဲ့သဖြင့် စိတ်မကောင်းကြီးစွာ ဖြစ်ခဲ့ရကြောင်း Facebook တည်ထောင်သူ မြန်မာအမျိုးသမီးငယ် မဇကာပေါက် (Mark Zuckerberg) ကပြောသည်။
ထိုအချိန်မှ စ၍ "မြန်မာများအတွက် Facebook" ဆောင်ပုဒ်ကို ချမှတ်ခဲ့ကာ Facebook ဖြင့် မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင်နိုင်ရေးအတွက် အစွမ်းကုန် အားသွန်ခွန်စိုက် ကြိုးပမ်းခဲ့သည်ဟု သူမကဆိုသည်။
ယခုအခါ မြန်မာအမျိုးသမီး အနုပညာရှင်ကြီး အမေနန်း (Eminem) ဆိုလျှင် Facebook တွင် Fan အများဆုံး စံချိန်တင်နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း၊ Facebook မှ တဆင့် မြန်မာ့ဂုဏ် ဆောင်နိုင်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း မဇကာပေါက်က မြန်မာပီပီ ဂုဏ်ယူစွာပြောသည်။ (25 Feb. သတင်းဖော်ပြပြီး)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က "I would like to haveaTwitter account and Facebook" (Click Here) ဟု ပြောစဉ်က တွစ်တာကို
ရှေ့တန်းတင်ပြီး Facebook ကို နောက်မှ ပြောသဖြင့် စိတ်မကောင်း ဖြစ်ရသေးကြောင်း၊ သို့ရာတွင် AFP သတင်းဌာနအား
"I want to have both Facebook and Twitter" (Click Here) ဟု ပြောသည့် အခါ အလွန် ၀မ်းသာပျော်ရွှင်ရကြောင်း၊ သူမ၏ Facebook အား Twitter မတိုင်မီ ပထမနေရာတွင် ဦးစားပေး ဖော်ပြ ပြောဆိုသည့် အတွက် ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာ အမျိုးသမီးငယ် မဇကာပေါက် ကဆိုသည်။
Posted by BS News at 12:56 AM0comments
မြန်မာ-ဗီယက်နမ် ရိုးရာ အိမ်တွင်းနတ်များ (အင်တာနတ်) ကွန်ယက် ချိတ်ဆက်ရန် စတင် စီစဉ်နေပြီး အဆိုပါ အိမ်တွင်းနတ်များသည် အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံများကို ဖြတ်၍ ရေလမ်းခရီးဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ ဖျာပုံမြို့နယ်မှ တဆင့် နိုင်ငံတွင်းသို့ ၀င်ရောက်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းသို့ ရိုးရာနတ် ကွန်ယက် ချိတ်ဆက်မှုများလေ နတ်သတင်းအချက်အလက် ပို့ဆောင်မှု မြန်လေ ဖြစ်လာမည်ဟု ၂၀၁၁ ရန်ကုန် ဘားကမ့်ပွဲ၌ မြန်မာ့ နတ်လောက ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း၊ သတင်း အချက်အလက်နှင့် နည်းပညာဌာန မှ လက်ထောက် အင်ဂျင်နီယာ ဦးမိတ်ဆွေယခုစိုးက ပြောခဲ့သည်ဟု ဘာကမ့်ပွဲ သို့ တက်ရောက်သူ တဦးက ပြောသည်။
"နိုင်ငံခြားက နတ်တွေ၊ အဲ- ဗီယက်နမ်နတ်တွေ ၀င်လာရင် မြန်မာပြည်က အင်တာနတ် မြန်မယ် မမြန်ဘူးဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့ဗျာ။ အခုအချိန်မှာတော့ အင်တာနတ်တွေကို တရုတ်နတ်မင်းကြီးရဲ့ ၀ိဥာဉ်နဲ့ ဆက်သွယ်ထားတယ် လို့ကြားတယ်။
မြန်မာပြည်သူတွေ သုံးစွဲနေတဲ့ အင်တာနတ်တွေကိုတော့ ကိုနတ်ရှင် (connection) ဆိုတဲ့ နတ်ကြီးက အုပ်စိုးထားတယ် ဆိုပဲ။
အဲဒီ ကိုနတ်ရှင် ဆိုတဲ့ နတ်ကြီးကလဲ ကိုကြီးကျော်နဲ့ ဆွေမျိုးတော်တယ်လို့ ပြောသံ ကြားပါတယ်ခင်ဗျ။
သူလဲ ကိုကြီးကျော်လိုပဲ.. တချိန်လုံး အရက်မူးနေတာ တွေ့တယ်ဗျ။ သူမူးနေတော့ အင်တာနတ်တွေ လှုပ်စိ လှုပ်စိနဲ့ လှိုင်းစီးသလို လမ်းလျှောက် ကြရတာပေါ့ဗျာ။ ဘယ်မြန်တော့ မတုန်း။ တခါတလေ ကိုနတ်ရှင်ကြီး အမူးလွန်ပြီး သတိမေ့သွားတဲ့ အချိန်တွေတောင် ရှိသေး။ အဲသလို အချိန်တွေဆိုရင် အင်တာနတ်တွေ သုံးလို့ မရတော့ဘူးပေါ့ဗျာ။ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့တော့ အဲဒီ ကိုနတ်ရှင် ဆိုတာကြီးကို ကျန်းမာ ချမ်းသာတော် မူပါစေကြောင်း၊ အရက်မူးသော်လည်း လမ်းမှန်မှန် လျှောက်နိုင် ပါစေကြောင်း နေ့စဉ် ပူဇော် ပသပြီး ဆုတောင်း နေရပါတယ်ဗျာ" ဟု ရန်ကုန်မြို့ရှိ အင်တာနတ် သုံးစွဲသူ တဦးက ပြောကြား သွားခဲ့သည်။
ကိုနတ်ရှင်ကိုကွယ်.. ပူဇော်ကာ ပသပါတယ်...(Photo: topdecktours)
Posted by BS News at 3:05 AM0comments
Facebook လူကြိုက်အများဆုံး အနုပညာရှင်အဖြစ် မြန်မာ အဖွားကြီးတဦး စံချိန်တင်
မြန်မာ အဖွားအို အမေနန်း (Photo: sodahead.com)
အမေရိကားရောက် မြန်မာအဖွားအို အမေနန်း (Eminem) သည် Facebook တွင် Fan အများဆုံးရှိသူ အနုပညာရှင် အဖြစ် စံချိန်တင်သွားပြီ ဖြစ်သည်။
ပရိသတ် 28,872,000 ရှိသူ လေဒီ ဂါဂါကို ကြိုက်နှစ်သက်သူပေါင်း 28,883,000 ဖြင့် ကျော်တက် သွားခြင်း ဖြစ်သည်။ အမေရိကန် နိုင်ငံသူ မြန်မာ အမယ်အိုကြီး "အမေနန်း" သည် အမေရိကားတွင် ရိုက်ကူးသည့် မြန်မာရုပ်ရှင် "ရှစ်မိုင်" ဇာတ်ကားတွင် သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး၊ မြန်မာဟာသ ဇာတ်မြူး "စောက်ပေါ" (Southpaw) ဇာတ်ကားတွင်လည်း သရုပ်ဆောင်မည်ဟု သတင်းတပုဒ်က ဆိုသည် (ဖတ်ရန်)။
Posted by BS News at 4:45 PM0comments
အပ်ငွေလွှဲငွေ အိမ်တိုင်ရာရောက် ဝန်ဆောင်မှုပေးသော ဘဏ်များအားအရေးယူမည်
ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များ အပ်ငွေလွှဲ ငွေ ကိစ္စများကို အိမ်တိုင်ရာရောက် လိုက်လံဆောင်ရွက်ပါက လုပ်ငန်း လိုင်စင်ရပ်ဆိုင်းမည်ဖြစ်ကြောင်း ဗဟိုဘဏ် ထုတ်ပြန်ချက်များအရ သိရသည်။
ဘဏ်အချို့သည် အပ်ငွေ၊ လွှဲ ငွေလုပ်ငန်းများကို အချိန်ကန့်သတ် ချက်မရှိဘဲ နေရာမရွေးလိုက်လံ၍ လက်ခံ ဆောင်ရွက်နေခြင်းကြောင့် ဗဟိုဘဏ်မှ ဘဏ်လုပ်ငန်းချိန်နှင့် ခွင့်ပြုထားသောနေရာတွင်သာ ဘဏ် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန် ညွှန်ကြား ချက်များ ထုတ်ပြန်လိုက်ကြောင်း သိ ရသည်။
”ဘဏ်တစ်ခုရဲ့ လုပ်ထုံး လုပ် နည်းမှာ အိမ်တိုင်ရာ ရောက်ငွေလိုက်လက်ခံတာမျိုး မပါ ဘူး။ နိုင်ငံတကာမှာလည်း ဒီလို ဝန်ဆောင်မှုပေးတာမျိုး မရှိဘူး။ ဒါပေမဲ့ အိမ်ကနေ ခြေတလှမ်း လှမ်းလိုက်တာနဲ့ ATM စက်ကနေ အချိန်ကန့်သတ်ချက် မရှိဘဲ ၂၄ နာရီ ငွေထုတ်နိုင်၊ ငွေအပ်နိုင်၊ ငွေလွှဲနိုင်တဲ့ ၀န်ဆောင်မှုတွေတော့ ရှိပါတယ်။ အဲဒါကို အတုခိုးပြီးတော့ စက်မဟုတ်တဲ့
ဘဏ်ဝန်ထမ်းတွေကို အသုံးပြုပြီး အများပြည်သူ သက်တောင့်သက်သာ ဖြစ်အောင် ဝန်ဆောင်မှု ပေးခြင်းမျိုးဟာ ဘဏ်လုပ်ငန်း စည်းမျဉ်းဥပဒေတွေနဲ့ မကိုက်ညီပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ လူတွေဟာ စက်မဟုတ်လို့ပါဘဲ။
ဒါကြောင့် ငွေအပ်လိုသူ၊ ငွေထုတ်လိုသူတွေ အနေနဲ့ ဘဏ်ကို ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ကျ အပင်ပန်းခံ လာရောက် ဆောင်ရွက်တာမျိုးပဲ လုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်”ဟု ဘဏ်လုပ်ငန်း ကျွမ်းကျင်သူ တဦးက သုံးသပ်ပြောကြားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ATM ဆိုင်းဘုတ်
(စက်များ မရှိသည်မှာ ကြာပြီဖြစ်သဖြင့် ATM မှာ အောင်တော်မူ ကို ညွှန်ပြခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်)
Posted by BS News at 3:50 AM0comments
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်းတွင် နယူးယောက်မီးလောင်မှုတခုကို စာဖွဲ့ ဖော်ပြထားခြင်းက မြန်မာဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ အနောက်မျှော်ရောဂါထနေကြောင်း ပေါ်လွင်စေသည်ဟု အကဲခတ်များက သုံးသပ်ကြသည်။
“မီးလောင်တာများ မြန်မာပြည်မှာလည်း နေ့တိုင်းလိုလို ဖြစ်နေတာပဲ။ ခုတော့ သတင်းစာမှာ နယူးယောက်မီးကို ပုံနဲ့တကွ တင်ထားတာ တွေ့ရတယ်။ ဒါဟာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေ အနောက်တိုင်းသတင်းတွေကိုပဲ ဦးစားပေးတယ်၊ အနောက်တိုင်းကိုမှ အဟုတ်ထင်တယ် ဆိုတာ သိသာနေတယ်ပေါ့နော်” ဟု ဖင်လန်နိုင်ငံ Shet Sa Ya Gyi တက္ကသိုလ်၊ နိုင်ငံတကာ လေ့လာရေးဌာန၏ လက်ထောက်ဌာနမှူး ဒေါက်တာ ပေါ်တင်က ပြောသည်။
“အနောက်တိုင်းသားတွေ ပေါက်တဲ့ အီးက ရှူလို့ပိုကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ သဘောပေါ့” ဟု သူက ဂုဏ်ယူစွာဖြင့် ဖြည့်စွက် ပြောကြားသည်။
တခြားသော မြန်မာ့အရေး လေ့လာသူများကလည်း ထိုသို့ ယူဆကြသည်။ သို့သော်လည်း ၎င်းတို့က BSN အတွက် ရေးမည့် သတင်းဖြစ်သောကြောင့် သုံးသပ်ချက် တရားဝင် ပေးရန် ငြင်းဆန်ကြသည်။
နယူးယောက်မီးသတင်း ဖော်ပြမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး အကောင်းမြင်သူတဦး ရှိသည်။ ထိုသူမှ ငရဲကြီး ၈ ထပ်၊ လေးလွှာ တွင် ရောက်နေသူ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးဝင်း ဖြစ်သည်။
“ဟေ့ကောင် - နယူးယောက်မှာလည်း မြန်မာပြည်သားတွေ အများကြီးနေတယ်ကွ။ ဒါကြောင့် အဲဒီမှာဖြစ်တာတွေကို ငါတို့သတင်းစာက ထည့်ပေးနေရတာပေါ့ကွ။ ငါတို့သတင်းစာကို အဆိုးမမြင်နဲ့ကွ” ဟု ငရဲခန်း အားလပ်ချိန်အတွင်း ပေးပို့သည့် အီးမေးတွင် ဖော်ပြထားသည်။
နယူးယောက်မီးလောင်သည့်နေ့က အင်းစိန်တွင် အိမ်ငါးလုံး ပြာကျခဲ့သော်လည်း မြန်မာ့အလင်းက ရေငုံနှုတ်ပိတ် နေခဲ့သည်။ ပြည်ပအခြေစိုက် မြန်မာသတင်းဌာန တခုတွင်မူ ထိုသတင်း ဖော်ပြသည်။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတို့က အင်းစိန်မီးသတင်းကို စာမျက်နှာထက်သို့ မပို့ရခြင်းမှာ ပြည်တွင်းဖြစ်ကို အထင်မကြီးကြောင်း၊ အနောက်တိုင်းသတင်းကိုမှ အထင်ကြီးကြောင်း၊ အနောက်မျှော်ရောဂါ မည်မျှ ရင့်နေကြောင်း ပြသသည့် သက်သေတခုဖြစ်သည်ဟု ဒေါက်တာပေါ်တင်က သုံးသပ်ပြသည်။
Posted by BS News at 2:53 AM4comments
လှေကားနစ်မြုပ်နေသည့် ရဟတ်ယာဉ်အား မကြာမီ ကြိုးဖြင့်ဆွဲတင်တော့မည်
ပူတာအိုမြို့နယ် အတွင်းရှိ မက်ဒရယ် ရေခဲတောင်လမ်းကြောင်း ရှာဖွေသည့် ထူးထရေးဒင်းပိုင် ရဟတ်ယာဉ်တစ်စီး၏ လူအတက်အဆင်း ပြုလုပ်သော လှေကားမှာ တောင်တစ်ဝက်ရှိ ရေခဲများ ဖုံးလွှမ်းနေသာ ဧရိယာအတွင်းသို့ နစ်ဝင်မှု ဖေဖော် ၀ါရီလ ၂၁ ရက်နေ့က ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ပြည်တွင်း မီဒီယာတခုက သတင်းဖော်ပြသည်။
အဆိုပါ ရဟတ်ယာဉ်မှာ ရာသီဥတု အခြေအနေ မကောင်းသဖြင့် ပျံသန်းမှု ခေတ္တရပ်နားနေစဉ် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
ရဟတ်ယာဉ်ပေါ်တွင် ထူးထရေးဒင်း၏ ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်သူ အပါအ၀င် လူ ၆ ဦးခန့် စီးနင်းလိုက်ပါလာကြောင်း အဆိုပါ သတင်းတွင် ဖော်ပြသည်။
နစ်ဝင်မှု ဖြစ်ပွားသည့် အဆိုပါ ရဟတ်ယာဉ်ကို Mi-17 တပ်မတော် လေယာဉ်ဖြင့် ကယ်ဆယ်ရေး လုပ် ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေကြောင်း၊ ထို့နောက် ရဟတ်ယာဉ်ကို ကြိုးဖြင့် ပြန်လည် ဆွဲတင်ကာ ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းများကို ဆက်လက် ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ထူးထရေးဒင်း၊ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦး က ပြောကြားခဲ့သည်ဟု မီဒီယာ သတင်းထောက်က ရေးသားသည်။
သတင်းထောက်က "Mi-17 လေယာဉ်"ဟု ရေးသားသော်လည်း ထူးထရေးဒင်း တာဝန်ရှိသူကမူ "Mi-17 ရဟတ်ယာဉ်"ဟု ပြောကြားသည်။ ထို့ကြောင့် ထူးထရေးဒင်း ရဟတ်ယာဉ်ကို လေယာဉ်ဖြင့် ဆွဲတင်မလား၊ (သို့မဟုတ်) ရဟတ်ယာဉ်ဖြင့် ဆွဲတင်မလား ဆိုသည်ကို အတိအကျ မသိရပေ။
''မက်ဒရယ် ရေခဲတောင် တစ်ဝက်လောက်မှာ လှေကား နစ်ဝင်သွားတာပါ။ တပ်မတော် ရဟတ် ယာဉ် Mi-17 နဲ့ ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်နေပါပြီ။ ပြီးရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ ကုမ္ပဏီပိုင် ရဟတ်ယာဉ်ကို ကြိုးနဲ့ပြန်ဆွဲတင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲသလို ဆွဲတင်လိုက်ရင် ရေခဲပြင်ထဲ နစ်မြုပ်နေတဲ့ ရဟတ်ယာဉ်ရဲ့ လှေကားတွေ ပြန်ပေါ်လာမှာ ဖြစ်ပြီးတော့၊ ထူးထရေးဒင်း ဥက္ကဌအပါအ၀င် လူ ၆ ဦးစလုံး လှေကားကတဆင့် ရဟတ်ယာဉ်ပေါ် ပြန်လည် တက်ရောက် နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်'' ဟု ဖြစ်စဉ်နှင့် ကယ်ဆယ်ရေး အစီအစဉ်များအပေါ် ထူးထရေးဒင်း ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၃ ရက်နေ့တွင် ပြောပြခဲ့သည်။
(Picture: Adapted from kopaw07.blogspot)
Posted by BS News at 6:43 PM4comments
ရေခဲတောင်တွင် ပိတ်မိနေသော တိုက်ကုန်း သေဌေးကြီး ဦးတေဇ ယမန်နေ့က လောကီဈာန် ရသွားသည်။
မူလက ကချင်ပြည်နယ် ဖုန်ကန်ရာဇီ ရေခဲတောင်ပေါ်သို့ အရေးပေါ် ဆင်းသက်ခဲ့ပြီး၊ ရေခဲပြင်ထဲ ရဟတ်ယာဉ် ကျွံကျသဖြင့် မပျံတက်နိုင်ဘဲ ဦးတေဇတို့ လူတသိုက် ဖုန်ကန်ရာဇီ ရေခဲတောင်ပေါ်၌ သောင်တင်နေခဲ့သည်။
(Photo & News: Click Here)
ထိုအတောအတွင်း တိုက်ကုန်းကြီး ဦးတေဇသည် အေးခဲလှသည့် တောင်ပေါ်၌ ရေခဲပြင် အတွင်းအား ကျင့်စဉ်ကို ပေါက်မြောက် အောင်မြင်သွားသည်။ ထို့ကြောင့် သိဒ္ဓိအောင် ဦးတေဇ ဖြစ်သွားကာ ကောင်းကင်ပေါ် ပျံတက်နိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယခုအခါ ဖုန်ကန်ရာဇီ ရေခဲတောင်ပေါ်တွင် ဦးတေဇ မရှိတော့ပေ။ ချင်းပြည်နယ်ရှိ ရေခဲနေသော မဒွယ်တောင်ပေါ်သို့ လောကီဈာန်ဖြင့် ပျံသန်းသွားပြီဟု ဆိုသည်။
(Photos & News: Click Here)
သိဒ္ဓိအောင် ဦးတေဇအနေဖြင့် ထူးရေခဲစက်ရုံနှင့် ရေခဲခြစ်ဆိုင်များတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် အဆင့်မြင့် ရေခဲအမျိုးအစားများကို ရေခဲတောင်ပေါင်းများစွာသို့ သွားရောက် ကုန်ကြမ်းရှာဖွေနေခြင်း ဖြစ်သည်ဟု BSN သို့ ပေးပို့သော Boxer ၏ သတင်းတပုဒ်တွင် ရေးသားထားသည်။
ဦးတေဇသည် ယခုအခါ ကောင်းကင်သို့ ပျံတက်ကာ၊ ဝေဟင်တွင် ပျံသန်းနိုင်ပြီ ဖြစ်သဖြင့် ကယ်ဆယ်ရေး ရဟတ်ယာဉ်များ လုံးဝ မလိုအပ်တော့ကြောင်း သိရသည်။ သို့ဖြစ်၍ ထိုင်းနိုင်ငံမှ မှာယူထားသည့် ရဟတ်ယာဉ်ကို ပြန်ပို့လိုက်ပြီဟု သိရပြီး၊ ချင်းတောင်မှ ရေခဲလေ့လာရေး အပြီးတွင် တိုက်ကုန်းကြီး ဦးတေဇ ဈာန်ဖြင့် အိမ်ပြန်လာတော့မည် ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
Posted by BS News at 2:13 AM3comments
ကျေးလက် အငွေ့အသက်၊ ကျေးလက် မြင်ကွင်းနောက်ခံနဲ့
မြန်မာ့ ရိုးရာ ကျေးလက် အက ကို ရှုစားတော် မူကြပါ
လက်တို့သူ- F.E.F.F Media
Posted by BS News at 1:28 AM 43 comments
လစ်ဗျား အာဏာရှင် ကဒါဖီ ဘ၀တပါးသို့ ကူးပြောင်းသွားပြီ
လစ်ဗျားနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပေါ်နေသည့် လူထု လှုပ်ရှားမှုများကို အာဏာရှင်ကြီး ကဒါဖီ ကြောက်ရွံ့ တုန်လှုပ်နေသည်။
မကြာမီ ဘ၀ပြောင်းကိန်းရှိသည်ဟု ဟူးရားများက နိမိတ်ဖတ်သဖြင့် ယတြာချေကာ ဘ၀ပြောင်းလိုက်သည်။
ယခုအခါ ဘ၀ ပြောင်းသွားပြီ ဖြစ်သော ကဒါဖီအား အရည်းကြီးဘ၀ ဖြင့် တွေ့မြင်နေရသည်။
သို့သော် အမြင်မှန်ရကာ ရာထူးမှ ဆင်းပေးပြီး၊ ရသေ့ တပသီ ကဲ့သို့သော ဘ၀သို့ ငြိမ်းအေးစွာ ကူးပြောင်းခြင်းမဟုတ်ဘဲ အရည်းကြီး အသွင်သို့ ပြောင်းလဲခြင်းသာ ဖြစ်သဖြင့် ဆက်လက် ဆိုးသွမ်းနေဦးမည် ဖြစ်သည်။
Posted by BS News at 2:37 PM 1 comments
နေပြည်တော် မြို့တော်ကြီးမှာ ဘာတွေ ဖြစ်ပျက်နေသလဲ ???
(ဗီဒီယို ဒါရိုက်တာ၏ အာဘော်သာ ဖြစ်ပါကြောင်း)
Source: Youtube/ MrFireLove1
Posted by BS News at 1:44 AM 1 comments
ကမ္ဘာတလွှား မော်တော်ကား ထုတ်လုပ်သူများ မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက် လေ့လာလျက်ရှိ
မြန်မာနိုင်ငံတွင် မော်တော်ကား ဘော်ဒီများကို အခြားနိုင်ငံများနှင့် မတူဘဲ တမူထူးခြားစွာဖြင့် တီထွင် ဖန်တီး ပြုလုပ်လျက်ရှိကြောင်း Eleven Media သတင်းတပုဒ် အရ သိရသည်။
ထိုကဲ့သို့ မြန်မာ့နည်း မြန်မာ့ဟန်ဖြင့် မော်တော်ကား ဘော်ဒီများ ထူးဆန်းစွာ ဖန်တီးပြုလုပ်နေမှုများကို လာရောက် လေ့လာကြသော ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ အသီးသီးရှိ မော်တော်ကား ကုမ္ပဏီများ အကြီးအကျယ် အံ့သြ သင့်သွားကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
ဘာကြောင့် အံ့သြသလဲ သိချင်ပါက ဖတ်ရန် ...
Posted by BS News at 1:30 AM0comments
မန္တလေးမြို့ပြဧရိယာ ယခင်ထက် သုံးဆကျော်ကျယ်ဝန်း၊ နေထိုင်သူများ မကြုံစဖူး အသားအရေ ဖြူဖွေးလာ
လက်ရှိအချိန်တွင် မန္တလေးမြို့ ဧရိယာသည် ၁၂၁.၇၆ စတုရန်းမိုင် ရှိကာ ဆယ် စုနှစ်တစ်ခုအတွင်း မြို့ဧရိယာ သုံးဆကျော်
ကျယ်ဝန်းလာသည်။ မန္တလေး လူဦးရေမှာလည်း ၁၁ သိန်းကျော် ရှိလာသည်။
ထူးခြားမှုအဖြစ် မန္တလေးတွင် နေထိုင်သူများ အသားအရေ အလွန်ဖြူဖွေး လာကြသည်ကို တွေ့ရသည်။ မြို့ပြဧရိယာ
သုံးဆကျော် ကျယ်ဝန်းလာခြင်း နှင့်အတူ မန္တလေးတွင် အသား ဖြူဖွေးသူများ အဆမတန် တိုးပွားလာခြင်းကြောင့်၊ တေးရေး စန္ဒရားလှထွတ်၏ "ရန်ကုန်သားနှင့် မန္တလေးသူ" သီချင်းစာသားပါ ဖော်ပြချက် မှားယွင်းသွားကြောင်း သိရသည်။
(Screen-shot from Youtube)
ထို့ကြောင့် အဆိုပါ သီချင်းကို ဗားရှင်း အသစ်ဖြင့် ပြောင်းလဲ သီဆိုရန် ဆင်ဆာအဖွဲ့မှ မြန်မာနိုင်ငံ ဂီတ အစည်းအရုံးသို့ ညွှန်ကြားချက် ထုတ်ပြန်လိုက်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ ပြောင်းလဲ သီဆိုမည့် သီချင်း ဗားရှင်းသစ်တွင် မန္တလေးမြို့ပေါ်နေ လူအများ အသား ဖြူဖွေးကြောင်းနှင့် မြန်မာစကားကို မပီကလာ ပြောဆိုကြောင်း စသည့် စာသား အချို့ ပြောင်းလဲ ထည့်သွင်းမည်ဟု သိရသည်။
Posted by BS News at 4:06 AM 1 comments
ရန်ကုန်မြို့ လမ်းဘေးတွေမှာ မကြာခဏ တွေ့ရလေ့ရှိတဲ့ မြင်ကွင်းတခု
Posted by BS News at 8:57 PM9comments
ရထား အဆင့်မြှင့်ခြင်းဆိုင်ရာ သတင်း အပြည့်အစုံ ...
Posted by BS News at 9:24 PM 12 comments
Posted by BS News at 12:16 AM4comments
Posted by BS News at 12:02 AM2comments
Posted by BS News at 4:59 AM 1 comments
ခြေချောင်းလက်ချောင်း အများဆုံးပါတဲ့ မြန်မာကလေး ကမ္ဘာကျော်ပြီ
ခြေချောင်းလက်ချောင်း အများအပြားရှိသည့် မြန်မာကလေးသတင်းကို နိုင်ငံတကာရှိ သတင်းဌာနပေါင်း
၁၀၀ ကျော်က ရေးသား ထုတ်လွှင့်နေကြသည်။
Posted by BS News at 2:42 PM0comments
လွှတ်တော်တက်နေသော အမတ်မင်းများ စိတ်ညစ်နေကြသည်။ လွှတ်တော်တက်ရန် နေပြည်တော်သို့ ရောက်ရှိချိန်မှ စ၍ ရေမချိုးရသေးသော အမတ်တဦး ဆေးခွင့်တင်ပြီး ဆေးရုံတက်ရန် စဉ်းစားနေသည်။ ဆေးရုံရောက်တော့မှ ရေကောင်းကောင်း ချိုးရန် စီစဉ်ထားကြောင်း အမတ်ကြီးက ပြောသည် (ရေမချိုးသတင်း၊ Click Here)။ အဆိုပါ အမတ်ကြီး ဆေးရုံတက်ရန် စဉ်းစားနေစဉ် အခြား အမတ်ကြီး တဦး ၀က်သား အစားများ သဖြင့် သွေးတိုးကာ ဆေးရုံ တင်လိုက်ရသည်။ အဆိုပါ သတင်းကို ယမန်နေ့ထုတ် ကြေးမုံသတင်းစာတွင် တွေ့ရသည်။ (အမတ်များ ဆိတ်သား ၀က်သား စားသည့်သတင်း၊ Click Here)။
အမတ်တဦးကမူ ဆိတ်သား၊ ၀က်သား စားရသည်မှာ ကောင်းသော်လည်း လွှတ်တော်အတွင်း လက်ဖက်ရည်သာ သောက်ရသဖြင့် စိတ်ညစ်နေသည်။ (ဆိတ်သား ၀က်သား သတင်းတွင် လက်ဖက်ရည်ပဲ သောက်နိုင်သည်ဟု ပါရှိ)။ ဆေးရုံတက်ပါက သတင်းမေးသူများ ယူလာမည့် အိုဗာတင်း၊ မိုင်လို၊ ဟောလစ် စသည်တို့ကို သောက်နိုင်မည် ဖြစ်သဖြင့် ဆေးရုံတက်ကာ အနားယူနေသည်ဟု ပြောသည်။ ဆေးရုံတက်လိုက်သဖြင့် လွှတ်တော်အတွင်း လက်ခုပ်တီးရသည့် အလုပ်နှင့် လက်ညှိုးထောင် ခေါင်းညိတ်ရသည့် အလုပ်များ သက်သာသွားကြောင်း ဆေးရုံတွင် အနားယူနေသည့် အမတ်များက ဆိုသည်။
လွှတ်တော် အတွင်း အသင့်ရေးပြီးစာများ ဖတ်ပြသည်ကို နားထောင်ရသဖြင့် လွန်စွာ အိပ်ငိုက်ကြောင်း၊ အိပ်မငိုက်ရ အမိန့်ကြောင့် (Click Here) လွှတ်တော်အတွင်း မအိပ်ငိုက်အောင် မနည်း ကြိုးစားကြရကြောင်း၊ ဆေးရုံရောက်သော အခါတွင်မှ အိပ်ချင်တိုင်း အိပ်နိုင်တော့ကြောင်း၊ လွှတ်တော် တက်စရာ မလိုသဖြင့် အလွန်ပျော်ရွှင်ကြောင်း ဆေးရုံတက် အမတ်ကြီးများက ပြောသည်။
Posted by BS News at 3:24 AM 1 comments
Posted by BS News at 3:58 PM0comments
Posted by BS News at 2:01 PM2comments
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မြန်မာလေကြောင်း (MAI)ဟာ လက်ရှိမှာ မလေးရှား၊ ထိုင်း၊ စင်ကာပူ၊ ကွာလာလမ်ပူနဲ့ ဗုဒ္ဓဂယာတို့ကို ပျံသန်းပြေးဆွဲနေတယ်။ မကြာခင်မှာ ရန်ကုန်ကနေ ကမ္ဘောဒီးယား၊ တရုတ်၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနတို့ကို တိုးချဲ့ပြေးဆွဲတော့မယ်လို့ ကြွေးကြော်တယ် (Read Here)။ အခုဆိုရင် လေယာဉ် လေးစင်း ရှိနေပြီ။ ငါးစီးမြောက် လေယာဉ် လာတော့မယ် လို့လဲ ဆိုတယ်။ ဒီလို ကြီးပွားလာနေတဲ့ MAI လေကြောင်း အကြောင်းကို တစေ့တစောင်း အကဲခတ် ကြည့်ကြရအောင်ပါ။
MAI မှာ အထက်ပါ လေယာဉ် အမျိုးအစား ဖြစ်တဲ့ Airbus A320-231 သုံးစီး ရှိတယ်။ လေယာဉ်နံပါတ်တွေက XY-AGG, XY-AGI နဲ့ XY-AGL တွေပါ။ ပထမ နှစ်စီးက Adria Airways လေကြောင်းမှာ သုံးပြီးသား လေယာဉ် အဟောင်းတွေ ဖြစ်သလို၊ တတိယမြောက် လေယာဉ်ကလဲ Cyprus Airways မှာ သုံးခဲ့တဲ့ လေယာဉ် အဟောင်း ဖြစ်ပါတယ်။ MAI မှာ နောက်ထပ် သုံးစွဲနေတဲ့ လေယာဉ် အမျိုးအစား နောက်တမျိုး ကတော့ Airbus A321-111 ပါ။ သူက လေယာဉ်အမှတ် F-GYAO ဖြစ်ပြီး Swiss Air နဲ့ Air Méditerranée တို့မှာ အသုံးပြုခဲ့တဲ့ လေယာဉ် အဟောင်း ဖြစ်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ (Photo: M Radzi Desa)
MAI ဟာ စစချင်းမှာ ဘရူနိုင်း လေကြောင်းနဲ့ မလေးရှားလေကြောင်းက လေယာဉ်တွေနဲ့ သူများ နှာခေါင်း အငှားတောင်းကာ စတင် ပျံသန်းခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက လေယာဉ်တွေဟာ သေသပ်လှပတဲ့ ရုပ်ဆင်း အင်္ဂါတွေ ရှိတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အသေအချာကြည့်ရင် လေယာဉ် အမြီးနဲ့ အင်ဂျင်တွေကိုပဲ MAI အမှတ်တံဆိပ် ဆေးရောင်ခြယ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလေယာဉ်ကတော့ MAI မှာ ပထမဦးဆုံး လေယာဉ် အဖြစ် အသုံးပြုခဲ့တဲ့ Royal Brunei Airlines က Boeing 757-2M6 လေယာဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ (Photo: Mika B Virolainen)
သိပ်မကြာပါဘူး၊ MAI ဟာ သူ့ရဲ့ လေယာဉ်တွေကို ရုတ်တရက် ကာလာ ပြောင်းလဲလိုက်ပါတယ်။ ဘာကြောင့် အဲသလို လေယာဉ် အရောင် ပြောင်းရပါသလဲ? (Photo: Jialian Gao)
လေ့လာကြည့်တဲ့အခါ လေယာဉ် အရောင်ပြောင်းတာမဟုတ်ဘဲ မူလ လေကြောင်းရဲ့ ကာလာအတိုင်း သုံးစွဲတာ ဖြစ်ကြောင်း အထက်ပါ ဓာတ်ပုံမှာ တွေ့ရပါတယ်။ မွဲတေလှတဲ့ မြန်မာ လေကြောင်းဟာ MAI ဆိုတဲ့ စာလုံး သုံးလုံးနဲ့ အမြီးကိုသာ ဆေးခြယ်ခဲ့တာပါ။ ပြီးတော့ PEGASUS ဆိုတဲ့ စာလုံးကို အပေါ်က အဖြူရောင်ခြယ်ပြီး ဖုံးဖိခဲ့ပါတယ်။ Boeing 737-82R အမျိုးအစားပါ။ (Photo: Reinhart Losch)
ဒီဓာတ်ပုံမှာတော့ သူများနှာခေါင်း အငှားတောင်းပြီး၊ သူတပါး လေကြောင်းလိုင်း အမှတ်သင်္ကေတ နဲ့ အရှက်မရှိ ပျံသန်းနေတဲ့ MAI ကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Boeing 737-82R အမျိုးအစား လေယာဉ် ဖြစ်ပါတယ်။ (Photo: Beiley)
သူများ နှာခေါင်း အငှားတောင်း MAI လေကြောင်းဟာ Fokker 100 လေယာဉ်ရဲ့ Air Bagan အမှတ်အသား ကိုတောင် MAI တံဆိပ်ပြောင်းပြီး ဆေးမသုတ် နိုင်လောက်အောင် မွဲတေသွားပါတယ်။ အဲဒီ လေယာဉ်ဟာလဲ Air Littoral မှာ သုံးခဲ့တဲ့ လေယာဉ် အဟောင်းကြီးပါ။ (Photo: M Radzi Desa)
Orient Thai Airlines တံဆိပ်အတိုင်း ပြေးဆွဲနေတဲ့ MAI ရဲ့ MD 82 (DC-9-82) လေယာဉ် အဟောင်းကြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုင်းစာလုံးတွေတောင် ပါလိုက်သေး။ (Photo: Chaity)
Pacific Air လေကြောင်း သင်္ကေတကို ဆေးပြောင်း မသုတ်နိုင်လောက်အောင် မွဲတေတဲ့ MAI ရဲ့ နောက်ထပ် MD 82 လေယာဉ် (Photo: Stéphane Mutzenberg)
MAI လေယာဉ်ရဲ့ အဆိုးရွားဆုံး အခြေအနေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးရောင် ကျွတ်နေတာကိုတောင် ကောင်းကောင်း ဆေးမသုတ်နိုင်တော့ပါ။ လူသူ မသုံးတော့တဲ့ MD 82 အမျိုးအစားပါ။ (Photo: Andrew Hunt)
လေယာဉ် အမြီးက တော်တော် ရွဲနေတာ တွေ့ရတယ်။ Continental, Lionair လေကြောင်း တွေမှာ ဖွတ်ဖွတ်ကြေအောင် သုံးခဲ့တဲ့ အဲဒီ လေယာဉ်ဟောင်းကြီးရဲ့ မူလ လေကြောင်း သင်္ကေတ အမှတ်အသား တွေရဲ့ ဘေးမှာ MAI တံဆိပ်ကို ဆေးခြယ်ထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ (Photo: Calixius Casper Koh)
ဒါတွေကတော့ သူများနှာခေါင်း အငှားတောင်းပြီးတော့ သူတပါး လေယာဉ် အဟောင်းတွေနဲ့ ပျံသန်း ပြေးဆွဲခဲ့ပြီး၊ ပြေးဆွဲဆဲ.. ပြေးဆွဲ လတ္တံ့သော MAI လေယာဉ်များ အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ MAI ဟာ ယခုအခါမှာလဲ သူတပါး ဖွတ်ဖွတ်ကြေအောင် သုံးစွဲပြီးဖြစ်တဲ့ လေယာဉ် အဟောင်းများကို ဆေးရောင်လှလှ ခြယ်ကာ၊ လေယာဉ် အသစ်ယောင်ဆောင်ပြီးတော့ ခရီးစဉ်တွေ တိုးချဲ့မယ်လို့ ကြွေးကြော်နေခြင်းသာ ဖြစ်ပါကြောင်း။
Posted by BS News at 2:24 AM 11 comments
ရန်ကုန်-နေပြည်တော် ပြေးဆွဲမည့် အဝေးပြေး ယာဉ်လိုင်းတစ်ခုမှ ဘတ်စ်ကားမယ်များ ထည့်သွင်းကာ ပြေးဆွဲရန် စီစဉ် ဆောင်ရွက်နေကြောင်း အဆိုပါ ယာဉ်လိုင်းဖြစ်သည့် JJ Express ကပြောသည်။
"ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည်မှာ လေယာဉ်မယ်ပဲ ရှိပါတယ်။ မြန်မာ့ လေကြောင်းက လေယာဉ်မယ်တွေ ဆိုရင် ခရီးသည်တွေကို အရသာ မရှိတဲ့ လက်ဖက်ရည်တွေ တိုက်လေ့ ရှိပါတယ်။ တခါတလေ သူတို့ ပျင်းရင် flight safety demonstration တွေ မလုပ်ကြပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ "ဘတ်စ်ကားမယ်" တွေကတော့ လန်းဆန်းစေတဲ့ တစ်ရှုး၊ ရေဗူး၊ အအေးဗူးနဲ့ စားသောက်စရာ တွေကို ကားပေါ်မှာ
ဝေငှ ပေးတဲ့ အလုပ်ကို လုပ်ပါမယ်။ မြန်မာ့လေကြောင်း လေယာဉ်မယ်တွေထက် ကျွန်တော်တို့ "ဘတ်စ်ကားမယ်"တွေက သာလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ ၀န်ဆောင်မှု ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်''ဟု JJ Express မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ရှင်းပြသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ယခုအချိန်အထိ "ဘတ်စ်ကားမယ်" ဟူ၍ မရှိသေးဘဲ "ဘတ်စ်ကားမောင်"များကသာ ခရီးသည်များကို ၀န်ဆောင်မှု ပေးလျက်ရှိသည်။ "ဘတ်စ်ကားမောင်"များသည် မြို့တွင်းပြေး ဘတ်စ်ကားများတွင် ခရီးသည်များကို ငပိသိပ် ငါးချဉ်သိပ် ကျပ်ပိတ်အောင် တင်ဆောင်ခြင်း၊ အော်ဟစ် ဆဲဆို ကြိမ်းမောင်းခြင်း၊ ဘတ်စ်ကားများ လုမောင်းရန် ဒရိုင်ဘာအား မြှောက်ထိုးပင့်ကော် လုပ်ပေးခြင်း၊ ငွေအကြွေ ပြန်မအမ်းခြင်း၊ မှတ်တိုင်ရောက်ပါက ခရီးသည်များကို အတင်းကားပေါ်မှ တွန်းချခြင်း စသည့်
နယ်ဝေးပြေး ဘတ်စ်ကားပေါ်မှ "ဘတ်စ်ကားမောင်" တဦး (Photo: BSN)
နယ်များသို့ သယ်ယူ ပို့ဆောင်သည့် အဝေးပြေး ဘတ်စ်ကားများတွင် လိုက်ပါသော "ဘတ်စ်ကားမောင်" များကမူ ကြားပေါက် ခရီးသည်များကို ကြားခုံများထိုး၍ တင်ခြင်း၊ ထိုင်စရာနေရာ မရှိအောင် ပစ္စည်းများ တင်ခြင်း၊ အခန့်မသင့်လျှင် ခရီးသည်များကို အော်ငေါက်ခြင်းစသည့် ၀န်ဆောင်မှုများကို ပေးလျက်ရှိသည်။ အဆိုပါ နယ်ဝေးပြေး ဘတ်စ်ကားပေါ်တွင် "ဘတ်စ်ကားမောင်"များ ထံမှ စူးရှသည့် ချွေးနံ့များကို ခရီးသည်များ မခံမရပ်နိုင်အောင် ရှုရိုက်ရလေ့ ရှိကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် အပြောင်းအလဲ အနေဖြင့် အသစ်ပေါ်ပေါက်မည့် "ဘတ်စ်ကားမယ်"များထံမှ သင်းပျံ့သည့် ရေမွှေးရနံ့များ ရှုရှိုက်နိုင်ရန် မျှော်လင့်လျက် ရှိကြောင်း ခရီးသည်တဦးက ပြောကြားသွားသည်။
Posted by BS News at 2:07 AM0comments
မြို့တော်ဝန်ပြုတ် ဦးအောင်သိန်းလင်း တစ္ဆေမွေးမြူရေး စတင်လုပ်ဆောင်နေသည်။
လွန်ခဲ့သော နှစ်အနည်းငယ်မှ အစပြုမွေးမြူခဲ့ပြီး ယခုအချိန်တွင် တဟုန်ထိုး တိုးတက်များပြား လာနေသည် ဆိုသော ရုပ်ရှင်မင်းသား ကိုကျော်သူ၏ သရဲတပ် အင်အားကို ယှဉ်ပြိုင် နိုင်ရန်ဟု ၄င်းက ပြောသည်။ ကိုကျော်သူ သရဲ မွေးမြူကြောင်း သတင်းကို ဤသတင်းဌာနမှ ပို့စ်မော်ဒန် သတင်းတပုဒ် အဖြစ် တင်ပြခဲ့ဖူးသည်။ (Click Here)
အဆိုပါ ပို့စ်မော်ဒန် သတင်းကို ဖတ်ပြီး မျက်စိလည်သွားသော ဦးအောင်သိန်းလင်းက ကိုကျော်သူ၏ သရဲအင်အားကို အချိန်တိုအတွင်း အမီလိုက်နိုင်ရန် လူသေအလောင်းများကို ငွေ ၂ သောင်းနှင့် အတင်းအဓမ္မ လုဝယ်ယူလျက် ရှိသည့်အပြင် လူသေဆုံး (သို့) အလောင်း တွေ့ရှိပါကလည်း မိမိတို့နှင့်သာ ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက် ပါရန် ဦးအောင်သိန်းလင်း ဦးဆောင်သော ကြံ့အဖွဲ့ကြီးမှ အမိန့်ထုတ်ပြန်ထားသည်။
ဤအတိုင်းသာဆိုလျှင် လူသေအလောင်း အရောင်းအ၀ယ် ဈေးကွက်တခု ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပြီး အလောင်းပျောက် ဆုံးမှု၊ အုပ်ဂူ ဖောက်ထွင်းမှု များလည်း ရှိလာနိုင်သဖြင့် အရေးကြီး လူသေ အလောင်းများကို ဘဏ်အချို့  တွင် သာ အပ်နှံထား သင့်ကြောင်း အသုဘရေးရာ ကျွမ်းကျင်တဦးက သုံးသပ်ပြောကြားသည်။
မည်သို့ပင် နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့် စည်းရုံး ဆွဲဆောင် နေသော်လည်း ဦးအောင်သိန်းလင်း၏ တန်ခိုးသိဒ္ဓိ မပြည့်စုံမှု၊ တစ္ဆေမွေး မကျွမ်းကျင်မှု တို့ကြောင့် ဦးအောင်သိန်းလင်း၏ အသင်းဝင် တစ္ဆေ အလွန်ပင် နည်းပါး နေသေးကြောင်း သိရသည်။
ထို့ပြင် သေသူ အားလုံးကို တစ္ဆေဟု သတ်မှတ်သဖြင့် အသုဘပိုင်ရှင်များက ဦးအောင်သိန်းလင်းကို ပြင်းထန်စွာ ဒေါသထွက်နေကြောင်းလည်း သိရသည်။ ၄င်း၏ အူကြောင်ကြောင် စုံစမ်းမှုများအရ ဦးကျော်သူ မွေးမြူထားသော သရဲ အရေအတွက်မှာ ၂.၅ သန်းခန့် အထိ တိုးတက် များပြားလာနေပြီဟု ဦးအောင်သိန်းလင်းက ဆိုသည်။ သို့သော် ကိုကျော်၏ သရဲမှာ မည်သို့သော သရဲများ ဖြစ်ကြောင်းကိုမူ ဦးအောင်သိန်းလင်း သဘောမပေါက်သေးချေ။
သရဲစစ်တပ် (Photo: cool-wallpapers.biz)
ကိုကျော်သူသည် မကြာသော အချိန်အတွင်းတွင် သူ၏ သရဲတပ်အင်အား ကို အသုံးပြုကာ မြန်မာ့တပ်မတော်ကို အမြစ်ပြတ်ချေမှုန်းလာနိုင်ကြောင်း BSNews ၏ ပို့စ်မော်ဒန်သတင်းကို ဖတ်ရှုပြီးသော မြန်မာ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကလည်း သုံးသပ်သည်။ ထို့ကြောင့် ကိုကျော်သူ၏ သရဲများနှင့် ယှဉ်ပြိုင်ရန်အတွက် တစ္ဆေ၊ သရဲ၊ ၀ိဥာဉ်များနှင့် သွေးစုပ် ဖုတ်ကောင် များ စစ်မှုမထမ်း မနေရ ဥပဒေကို မကြာသေးမီက အရေးပေါ် ပြဌာန်းလိုက်သည်။ အဆိုပါ ဥပဒေအရ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ ကွယ်လွန်ပြီးသည့်အခါ နာနာဘာဝများ ဖြစ်သည့် တိုင်အောင် စစ်မှုထမ်းကြရမည်ဟု ဆိုသည်။ (Click Here)
(ပြည်တွင်း သတင်းထောက် ပေးပို့သည်)﻿
Posted by BS News at 1:24 AM 1 comments
Apple Inc. ရဲ့ CEO က မြန်မာတွေကို ကျေးဇူးတင်စကားပြော
ဆေးခွင့်နဲ့အနားယူနေတဲ့ Apple Inc. က CEO Steve Jobs ဟာ
BSNews ရဲ့ "Apple ကုမ္ပဏီမှ မြန်မာပြည်တွင် စူပါကွန်ပျူတာများ တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်" ဆိုတဲ့ သတင်း တင်ဆက် ခဲ့မှုကြောင့် (Click Here) BSNews မှာ အင်တာဗျူးတစ်ခု ထည့်ပေးဖို့ ယနေ့ ဘာလင်တံတိုင်းနေ့မှာ ပန်းသီးစားသူများအဖွဲ့ကို အတင်းကာရော ဆက်သွယ်ပြီးတော့ ပန်ကြားလာပါတယ်။
သူက iPad ဆိုတာ မြန်မာပြည်က ကျောက်သင်ပုန်း ဒီဇိုင်းကို အသုံးပြုထားပါလို့ ပြောပြပါတယ်။
ဒါကြောင့် မြန်မာပြည်သူတွေကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ သူက အထူးအလေးပေး ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။
သူနဲ့ ပန်းသီးစားရင်း စကားပြောခဲ့တာတွေကို ပြန်လည် ဖွဆို လိုက်ပါတယ်။
ခင်ဗျားတို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကျေးဇူးတွေကျွန်တော်တို့ company အပေါ်မှာအများကြီးရှိပါတယ်။
ကျွန်တော်လေ iPad အတွက် design ကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာပေါ့လေ
တမူထူးခြားအောင်ဆိုပြီး ဘယ်သူမှလည်းမထင်မှတ်ထားတဲ့ design နဲ့ပေါ့လေ
ဒါနဲ့ အာရှမှာက ဒါမျိုးလေးတွေကရှိတတ်သားဆိုတော့ ပြဲပြဲစင်အောင်ရှာတဲ့အခါ
ခင်များတို့မြန်မာနိုင်ငံက ကျောက်သင်ပုန်း ဆိုတာကိုသွားပြီးတွေ့တယ်ဗျာ...
( လက်ဖျောက်တီးလျက် ) ကျွန်တော်လေ ပျော်လိုက်တဲ့အပျော် ၂ ရက်လောက်အိပ်မပျော်ဘူး၊ အဲဒီတုန်းထဲကပြောချင်နေတာ။
ဒီဘက်မှာက ကျောက်သင်ပုန်းကို တော်ရုံတန်ရုံ သိပ်ပြီးသိကြတာမဟုတ်တော့ design ကိုလည်းကြိုက်ကြ အရောင်းလည်းသွက်တယ်ဗျား။
အခု ကျွန်တော်လေ နောက်ထုတ်မဲ့ iPad2ကိုလည်း ကျောက်သင်ပုန်း နဲ့ပိုပြီးတူအောင်လုပ်ထားတယ်ဗျာ
Home button ဆိုတဲ့ ခလုတ်ထည့်မထားဘူး ညှင်း ညှင်း ညှင်း။
အဲ...နောက်ပိုင်းမှာဆက်ထုတ်မယ့် iPad3အတွက်ကိုလည်း ကျွန်တော်လေ ကျောက်တံပါထည့်ပေးရင်ကောင်းမလားပေါ့လေ စဉ်းစားထားတယ်ပေါ့။
နို့ ဒါပေသိ ကျောက်သင်ပုန်း မူပိုင်ခွင့်နဲ့ပါတ်သက်ပြီး ကျွန်တော့်ကိုဘာမှတောင်းဆိုဖို့တော့မကြိုးစားစေချင်ဘူးနော
လို့ ပြောယင်း သူ့ရဲ့ style အတိုင်း အဟက်ဟက် နဲ့ရယ်ရင်း နိဂုံးချုပ်သွားပါတယ်။
Apple will remove home button on next iPad and iPhone
Posted by BS News at 8:01 PM3comments
ယနေ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက်နေ့သည် ဘာလင်တံတိုင်းနေ့ ဖြစ်သည်။ ထိုနေ့တွင် အရှေ့ဘာလင် နှင့် အနောက်ဘာလင်ကို ကာဆီးထားသော ဘာလင် တံတိုင်းကြီး ပြိုလဲသွားပြီးနောက် အရှေ့နှင့် အနောက် ၂၉ နှစ်နီးပါး ကွဲကွာနေသော ဘာလင်မြို့မှ ချစ်သူနှစ်ဦး ပထမဦးဆုံး အကြိမ် ပွေ့ဖက်ကာ မွှေးမွှေးပေးကြသည့် နေ့ဖြစ်သည်။
ချစ်သူများကို စည်းခြားလိုက်သည့် ဘာလင်တံတိုင်း (Photo: novaonline)
ဘာလင် တံတိုင်းကို ၁၉၆၁ သြဂုတ် ၁၃ တွင် အရှေ့ဂျာမနီ အစိုးရက စတင် ကာရံခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှ စ၍ ဘာလင် တမြို့တည်းတွင် နေထိုင်သည့် ချစ်သူများလည်း ဝေးကွာခဲ့ကြရသည်။ တွေ့မည် ဆိုလျှင်ပင် တွေ့ဆုံရန် လျှောက်လွှာ တင်ရသည့် ဘ၀၊ ဗီဇာ ယူရသည့် အခြေအနေဖြစ်သည်။ ၁၉၈၉ နိုဝင်ဘာ ၉ တွင် ဘာလင် တံတိုင်းကို စတင် ဖြိုဖျက်သည်။ ထိုနေ့မှ စ၍ အရှေ့ အနောက် ဘာလင်မှ ကွဲကွာသူများ ပြန်လည် ဆုံတွေ့မှု စတင် သော်လည်း အမျိုးသားများက တူများ၊ ပုဆိန်များဖြင့် ထုရိုက်ဖြိုဖျက်ခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သဖြင့် ပြန်လည် ဆုံတွေ့သူများမှာ အမျိုးသားများသာ ဖြစ်သည်။ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက်ရောက်မှသာ ဘာလင်တံတိုင်းကြီး ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြိုလဲသွားခဲ့ပြီး ချစ်သူများ ပြန်လည် ဆုံစည်းခြင်း ဖြစ်၏။ ၁၉၉၀ အောက်တိုဘာ ၃ ရက်တွင် အရှေ့နှင့် အနောက် ဘာလင် မှ ၂၉ နှစ်တာ ကွဲကွာနေသော ချစ်သူများ ပေါင်းစည်းမှု တရားဝင် အသိအမှတ်ပြု ခံရပါသည်။
ဘာလင် တံတိုင်း အကြောင်း
Posted by BS News at 1:38 PM0comments
ပြည်ပထွက်ခွာသူများအဖွဲ့ အခွန်စိစစ်ရေးရုံးနဲ့ တစ်မနက်တာ
မနက် ၉ နာရီလောက်ဆို အစိုးရရုံးတွေ ဖွင့်ချိန်မို့ Taxi ကလေးနဲ့ အပြေးသွားခဲ့ပါတယ်...
အရပ်သားစကားနဲ့ဆို ပုံစံ ၁၉ ရုံးပေါ့....
ရုံးရှေ့ကိုလည်း ရောက်ရော သံပန်းတံခါးပိတ်ထားတဲ့ ရုံးကြီးနဲ့ ရုံးမျက်နှာစာအပြည့် အုံနေတဲ့ လူတွေကို တွေရတော့ သိလိုက်ပါတယ်....ထုံးစံအတိုင်းပဲဆိုတာ....တိုးရ ဝှေ့ရတော့မယ်ဆိုတာပေါ့.....
ဒါပေမဲ့ ဘုမသိ ဘမသိနဲ့တော့ ဒီအတိုင်း တိုးမနေနိုင်တာနဲ့ မေးကြည့်မိပါတယ်..ဘာလို့တိုးနေကြတာလဲပေါ့..အဲဒါနဲ့ တန်းစီတိုးနေတဲ့လူတွေက ဒီနေ့ကစပြီး ရုံးဖွင့်နောက်ကျမှာတဲ့..ပြီးတော့ လူဦးရေ အကန့်အသတ်နဲ့ပဲ အခွန်ကင်းရှင်းကြောင်းစာရွက်တွေ ထုတ်ပေးမတဲ့...မရလို့လည်း မဖြစ်ဘူးလေ..ဒီစာရွက်ပြမှ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အနီရောင်စာအုပ်ရမှာကိုး။ ဒါနဲ့ပဲ တိုးကြလေတော့သတည်းပေါ့...
၁၀ နာရီမှ ရုံးတံခါးဖွင့်မှာ ဆိုတော့ ၁ နာရီလောက်တော့ စောနေသား၊ ဒါပေမဲ့ မရဘူးဆရာရေ့ တိုးနေကြတာမှ ပက်ပက်စက်စက်..တစ်ခုကောင်းတာက မိန်းကလေး သက်သက်၊ ယောက်ကျားလေးသက်သက်မို့။ နို့မို့ဆို မတွေးဝံ့စရာပါပဲ။
နေကလည်းပူတာမှ ခြစ်ခြစ်တောက်၊ တန်းစီတဲ့နေရာကနေလည်း ဘယ်မှ မလှုပ်ရဲ၊ နေရာပျောက်သွားမှာလေ။ ဒါနဲ့ ဖွင့်ပါပြီတဲ့ ၁၀ နာရီ။ ၁၀ ယောက်တစ်ခါတဲ့။ အမလေးလေး တိုးလိုက်တာမှ ပိုက်ဆံအလကားဝေသလားမှတ်ရတယ်၊ တံခါးတစ်ခါဖွင့်ရင် တိုးလိုက်၊ နင်းလိုက်၊ ကြိတ်လိုက်နဲ့ပေါ့။ ကဲရောက်ပါပြီနောက်ဆုံးအထဲကို။ ၀င်တာနဲ့ ဖောင်ဝယ် - ပိုက်ဆံ ၁၀၀၀။ သွား ဟိုနားကို။ ဘာညာဖြည့်။ တိုကင်သွားယူ။ နာမယ်ခေါ်မယ် စောင့်နေ။ မကြားလို့ကတော့ နာပြီမှတ်။
ကဲရော့ ဒီမှာ..ဘဏ်ကိုသွား ပိုက်ဆံသွားသွင်း..ရီတော့ရီရသား..ဘဏ်ဆိုင်းဘုတ်ကို ဖတ်ရတာ..E-bank တဲ့..အဟမ်း..ဘဏ်အတွက် ဖောင်စဖြည့်တာကနေ အဆုံးထိ အီးနဲ့ပတ်သက်ပြီး လုပ်ရတာဆိုလို့ ထိုင်စောင့်ရင်း အီးပေါက်တာလေးပဲ ရှိပ။
ဒါနဲ့ သွားစမ်းဟဲ့ ဟိုအပေါက်ဆိုပြီး သွားလိုက်ကြတာ နောက်ဆုံး လူတွေ စုပုံ စောင့်နေတဲ့ အ၀င်ဂိတ်ကို ပြန်ရောက်..မျက်စိသူငယ်နဲ့ ဘာလဲဟဲ့ဆိုပြီးပြန်စောင့်ပေါ့နော်..ဒါနဲ့ ဥပဓိရုပ်ကောင်းကောင်း အောစ့်ဖစ်ဆာကြီးတစ်ယောက်ထွက်လာပြီး မတိုးကြနဲ့ နာမယ်ခေါ်မဟဲ့လုပ်..ဘာရမလဲ..မြန်မာနိုင်ငံသားပီပီ တိုးလိုက်ကြတာမှ လက်ကုန်၊ အကြောင်းသိတယ်လေ..မတိုးလို့က ဘာမှ မရ။ ထမင်းစားချိန်လည်း ရောက်ပြီ ထမင်းကလည်းမစားရသေး၊ ရေလည်းသွားမသောက်ရဲ ကိုယ့်အလှည့်လွန်သွားမယ်လေ...ဒါနဲ့ပဲစောင့်လိုက်တာ..ဟော ရပါပြီတဲ့ စက္ကူစုတ်သာသာ အခွန်ကင်းရှင်းကြောင်းစာရွက်တဲ့..ပြန်မယ်လုပ်တုန်း..ဟေ့ဟေ့ ဦးစီးမှူးလား ဘာလားဆီမှာ လက်မှတ်သွားထိုးဆိုလို့ အမြန်သွားလိုက်တာမှ ဖတ်ဖတ်မော။ ရုံးချိန်မှာ ရုံးမှာ မရှိတဲ့ လူကြီးရဲ့ စားပွဲပေါ်က စာရွက်ထပ်ကို ကြည့်ပြီး အမယ်လေးနော် ဒီတစ်သက် နိုင်ငံခြားမသွားရလည်း ရှိစေတော့..စိတ်ကို တုံးတုံးချတဲ့ အချိန်မှ ပိုက်ဆံ ၁၀၀၀ ထုတ်ထား လာပြီကွ လက်မှတ်တွေ ဆိုင်္ပြီး တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် အော်တိုတွေရလို့ သက်သာရာရ..
ဒါနဲ့ပြီးပြီလားဆိုတော့ မပြီး မိတ္တူဆိုတော့..သွားပါတယ် ရုံးထဲက မိတ္တူဆိုင် ငါးရာတန်ပေးလိုက်တာ ပြန်ကို မရ။ အော် ဒုက္ခ..ဒုက္ခလို့သာ တ ရင်း နောက်တစ်နေ့ အနီရောင်စာအုပ်ရုံးကလေးကို သွားရမဲ့ အရေး ရင်လေးမိသေး။
Posted by BS News at 2:52 AM3comments
Posted by BS News at 2:13 AM7comments
ရတနာဂီရိမှ မန္တလေးနန်းတော်စတိုင် သီပေါမင်းစံအိမ်တော်ကို အိန္ဒိယက ပြုပြင်မွမ်းမံ
သီပေါမင်း နေထိုင်သွားခဲ့တဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ရတနာဂီရိက စံအိမ်တော်ကို ပြန်လည် ပြုပြင်ဖို့ စီစဉ်နေကြပါတယ်။ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ် ဇွန်လက ပြတိုက်ဖြစ်လာတဲ့ စံအိမ်တော်ကို ပြင်ဆင် မွမ်းမံဖို့ ရှေးဟောင်းသုတေသနနဲ့ ပြတိုက်ဌာနက ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီ စံအိမ်ကို မန္တလေး စတိုင် နန်းတော် ပုံစံလိုမျိုး ဆောက်ထားတာ ဖြစ်တယ်လို့ သတင်း တပုဒ်က ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မန္တလေးနန်းတော်နဲ့ ရတနာဂီရိ စံအိမ်ကို ယှဉ်ကြည့်တဲ့အခါ တူတာဆိုလို့ အနီရောင်ပဲ တွေ့ရပါတယ်။
ပြန်ဆောက်ထားတဲ့ မန္တလေးနန်းတော် (Photo: travelpod)
မန္တလေးစတိုင် မန္တလေးနန်းတော် ပုံစံ ဆောက်လုပ်ထားတယ် ဆိုတဲ့
ရတနာဂီရိမှ သီပေါမင်းစံအိမ်တော် (Photo: OkTaTaByeBye)
Original News in the Times of India
Posted by BS News at 1:22 AM0comments